ထုတ်ကုန်များ - Chengdu Optic-Well Photoelectric Co., Ltd.
နီလာသည် စံပြအလင်းပြပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် BK7 ကဲ့သို့သော သမားရိုးကျ optical ပစ္စည်းများထက် ပိုကျယ်သော pass band ပါရှိရုံသာမက ချေးခံနိုင်ရည်၊ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် အပူချိန်မြင့်မားသော လက္ခဏာများပါရှိသည်။ ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ၊ နီလာသည် အဆင့်9မာကျောမှုသို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး သဘာဝတွင်ရှိသော စိန်များ၏မာကျောမှုထက် ဒုတိယသာလွန်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ နီလာသည် အလွန်ကောင်းမွန်သောခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေအောက်တွင် ပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နီလာဝင်းဒိုးသည် KY ကို အသုံးပြု၍ အလွန်ကောင်းမွန်သော optical စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် အသုံးပြုသည် တိုးတက်မှုနည်းလမ်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ တိမ်းညွှတ်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အဝိုင်းခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်း၊ ပွတ်ပေးခြင်း စသည်တို့ကဲ့သို့ အေးသော optical processing အဆင့်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ၎င်းတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော optical နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးချယ်ရန် မတူညီသော လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ တိကျမှုများဖြင့် ယေဘူယျတိကျမှု၊ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် အလွန်မြင့်မားတိကျသောထုတ်ကုန်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အားလုံးသည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ပုံများပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၌အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများစတော့ရှယ်ယာရှိပါတယ်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
နီလာတံနှင့် နီလာပြွန်ကို အသုံးချခြင်းသည် မြင့်မားသော မျက်နှာပြင် မာကျောမှုနှင့် နီလာ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းတွင် တိကျသောပန့်များအတွက် နီလာအတုံးများကို အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ နီလာ၏ကောင်းမွန်သောလျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်၊ အချို့သောဖောက်သည်များသည် အချို့သော HIFI Audio စက်များတွင် လျှပ်ကာအချောင်းများအဖြစ် လုံးတီးမပါသော သို့မဟုတ် ဆလင်ဒါပွတ်ထားသော နီလာချောင်းများကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်သော နီလာချောင်းများ၏ အဓိကအမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိသည်။ အဓိကကွာခြားချက်မှာ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးတွင်သာဖြစ်ပြီး ဆလင်ဒါမျက်နှာပြင်ကို ပွတ်ပြီး ဆလင်ဒါမျက်နှာပြင်ကို ပွတ်မည်မဟုတ်ပါ။ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေး၏ရွေးချယ်မှုကိုဖောက်သည်၏တိကျသောလိုအပ်ချက်များမှလုံးဝဆုံးဖြတ်သည်။ နီလာပြွန်သည် နီလာတံကဲ့သို့ ရှည်လျားသော အခေါင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စိန်ပြွန်များထုတ်လုပ်ရန် အခြေခံအားဖြင့် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်၊ နီလာပြွန်များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလင်းလမ်းညွှန်သည် အလှကုန်လေဆာ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောသွေးခုန်နှုန်း (IPL) အပလီကေးရှင်းများတွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ IPL သည် မလိုလားအပ်သော ဆံပင်များကို ဖယ်ရှားရန်အပြင် အခြားသော အလှကုန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုသည်။ နီလာသည် BK7 နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဆီလီကာအတွက် အသုံးများသော အစားထိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အလွန်မာကျောသော ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းအင်ရှိသော လေဆာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ IPL အသုံးချမှုများတွင် နီလာသည် အရေပြားကို ဆက်သွယ်ပေးသည့် အအေးခံပုံဆောင်ခဲတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကာ တစ်ချိန်တည်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကုသမှုဆိုင်ရာ အာနိသင်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ကုသမှုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော အအေးခံခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ BK7 နှင့် quartz တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နီလာသည် ပိုမိုကြာရှည်ခံနိုင်မှုနှင့် ပျက်စီးမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။ Sapphire သည် မြင်နိုင်သော နှင့် လှိုင်းတို အနီအောက်ရောင်ခြည် အကွာအဝေး တစ်ခုလုံးတွင် ကောင်းမွန်သော ထုတ်လွှင့်မှုကိုလည်း ပေးပါသည်။
Sapphire Lens နှင့် Prism
မြင့်မားသော Compressive Strength (နီလာ 2Gpa၊ သံမဏိ 250Mpa၊ Gorilla Glass 900Mpa)၊ မြင့်မားသော Mohs မာကျောမှုအပြင်၊ နီလာသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဓာတုနှင့် အလင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ နီလာသည် 300nm မှ 5500nm အကွာအဝေးတွင် (ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်ကို ဖုံးအုပ်ထားသည်)။ နှင့် အနီအောက်ရောင်ခြည် ဧရိယာ) သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဂီယာစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး လှိုင်းအလျား 300nm-500nm တွင် ထုတ်လွှင့်မှုအထွတ်အထိပ်သည် 90% နီးပါးအထိ ရောက်ရှိသည်။ နီလာသည် နှစ်ခြမ်းကွဲသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ၎င်း၏အလင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများစွာသည် ကြည်လင်သော တိမ်းညွှတ်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ၎င်း၏သာမန်ဝင်ရိုးတွင်၊ ၎င်း၏အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်းသည် 1.796 မှ 350 nm မှ 1.761 မှ 750 nm တွင်ရှိသည်။ အပူချိန် အလွန်ပြောင်းလဲလျှင်ပင် ၎င်း၏ပြောင်းလဲမှုသည် အလွန်သေးငယ်ပါသည်။ အပူချိန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဂြိုလ်တုမှန်ဘီလူးစနစ်များ၊ အက်ဆစ်အတွက် အလင်းယပ်အညွှန်းအလင်းအာရုံခံကိရိယာများ၊ ပြင်းထန်သောရာသီဥတုအခြေအနေများမှ ကာကွယ်ရန်လိုအပ်သော စစ်ရေးပြကွက်များ၊ သို့မဟုတ် ဖိအားမြင့်အခန်းများတွင် စောင့်ကြည့်သည့်အခြေအနေများကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေပါက၊ နီလာဖန်သည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
Synthetic sapphire bearings နှင့် ruby ​​​​ bearings တို့သည် ၎င်းတို့၏ မာကျောမှုနှင့် မြင့်မားသော polishing စွမ်းရည်တို့ကြောင့် တူရိယာများ၊ မီတာများ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများနှင့် အခြားတိကျသောစက်ပစ္စည်းများအတွက် စံပြကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်းများအဖြစ် ယေဘုယျအားဖြင့် မှတ်ယူကြသည်။ ဤဝက်ဝံများသည် ပွတ်တိုက်မှုနည်းခြင်း၊ တာရှည်ခံခြင်းနှင့် ဘက်မြင်တိကျမှုမြင့်မားသည်။ . အရေးကြီးတယ်။ မာကျောမှုသည် စိန်ပြီးလျှင် ဒုတိယဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်နီလာ၏ ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှုမှာ သဘာဝ နီလာနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း အညစ်အကြေးများနှင့် အပြစ်အနာအဆာများကို ဖယ်ရှားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ကျောက်မျက်များကို သယ်ဆောင်သည့် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပင် နီလာသည် အက်စစ်ဓာတ် သို့မဟုတ် အယ်ကာလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ထိခိုက်မှု။ ထို့ကြောင့်၊ ရေနံဓာတု၊ လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာများတွင် ၎င်း၏အသုံးချမှုမှာ အလွန်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ . Sapphire ဝက်ဝံများကို စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။